कर्णालीमा यसरी भित्रिदैछ कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट शनिवार, बैशाख ४, २०७८
सुर्खेतबाट धरान हिडेको बस कोलहपुरमा दुर्घटना शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
आज थप ९०० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
बम विस्फोट चार सर्वसाधारणको मृत्यु शाह वाली कोट जिल्लाको जर्ताली इलाकामा ती परिवारको गाडी बमसँग ठोक्किँदा उनीहरुको सवारीसाधान ध्वस्त भएको प्रहरी प्रवक्ता जमाल बराक्जाईले सिन्ह्वा समाचार समितिलाई बताउनु भएको छ । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
सल्यानका दर्जनौं विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा सल्यानका सबै भन्दा बढी दार्मा गाउँपालिकाका ११ विद्यालयमा रकम परेको छ । यस्तै छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा ८, त्रिवेणीमा ४, सिद्ध कुमाखमा ४, कुमाखमा ४, कपुरकोटमा ४ शारदा नगरपालिकाका ६, बनगाड कुपिण्डेका ५ र बागचौर नगरपालिकाका ४ विद्यालय छनौटमा परेका छन् । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
माटो खन्दा सिमकोट विमानस्थल जोखिममा विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताउका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले माटो झिक्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने जानकारी दिए । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
भेंडाको पाठापाठी र किसान ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा दिएको भेंडाका पाठापाठीका साथमा किसान । नगरपालिकाले अनुदानमा किसानलाई ५८ वटा भेंडाको पाठापाठी दिएको हो । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
ईश्वरले पनि उठ्न अल्छी गरे ? यदि तिमीले जस्तै हरेक बिहान ईश्वरले पनि उठ्न अल्छी गरे भने ? शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
‘ग्रीन’ कर्णाली ‘ब्ल्याक’ बन्दै कर्णालीको हिमाली जिल्ला मुगुको रारा ताल आसपासको हावा अति प्रदूषित बनेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वायु गुणस्तर निगरानी इकाईका अनुसार मुगुको रारा ताल क्षेत्रको हावा प्रदूषित बनेको हो । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
'एमाले र माओवादी दुवैलाई कांग्रेसले समर्थन गर्दैन' कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत लिँदैछन् । तर अल्पमतमा रहेका उनी अरु पार्टीका सांसदले साथ नदिने भएपछि उनको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ । माओवादी केन्द्रसँग १२ जना मात्रै सांसद छन् । शुक्रवार, बैशाख ३, २०७८
थप ५३४ जनामा कोरोना पुष्टि मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ५८८ मा पिसीआर र ५६४ मा एन्टिजेन गरी चार हजार १५२ को कोरोना परीक्षण गर्दा ५३४ मा कोरोना पुष्टि भएको हो । चार सय ९० मा पिसीआर र ४४ मा एन्टिजेन पोजिटिभ आएको हो । बिहिवार, बैशाख २, २०७८